Frank Lampard Oo Caddeeyey Inuu Ka Cadhooday Ciyaartoydiisa
Frank Lampard ayaa muujiyey cadho uu ka qaaday ciyaartoyda kooxdiisa oo u hoggaansami waayay ammarradiisa iyo taatikadii ciyaareed ee uu u dejiyey inay ku waajahaan Arsenal ciyaartii guul-darradu kasoo gaadhay ee finalka FA Cup.
“Phil Foden Ayaa Ka Wanaagsan Rashford Iyo Greenwood,
Blues ayaa bilowgii ciyaarta u muuqatay inay koobkeedii ugu horreeyey ee xili ciyaareedkan ku guuleysanayso markii uu Christian Pulisic u dhaliyey gool bilowgii ciyaarta, laakiin Aubameyang ayaa difaaca Chelsea kaga xoog batay xeradooda ganaaxa, isla markaana ka dhaliyey laba gool oo Arsenal u horseeday inay koobka ku guuleystaan.
Fursadda hore waxa uu Aubameyang ka helay Cesar Azpilicueta oo uu kubadda kala soo baxday, kaddibna xerada ganaaxa ku riday oo rikoodhe loogu loogu dhigay, kaas oo uu gool u beddelay iyadoo Cabellero dhinaca kale u diray, midka labaadna waxa uu xerada ganaaxa dhexdeeda ku farsameeyey Kurt Zouma ka hor intii aanu kubadda ka dulqaadin goolhayaha.
Bishii hore ayuu sidan oo kale Aubameyang usoo galay Manchester City oo uu laba gool kasoo dhaliyey semi-finalkii, waana sababta uu Lampard uga cadhaysan yahay ciyaartoyda kooxdiisa, sababtoo ah, waxay raaci waayeen taatikadii uu usoo dejiyey ka hor ciyaarta ee lagu xakamaynayay Aubameyang.
Lampard waxa uu qirtay in Aubameyang uu yahay weeraryahan halis ah oo ay horena usoo arkeen Is-aaragii bishii January, isla markaana uu yahay xiddiga ay labada kooxood is dheeraayeen, taas darteedna uu dardaaran gaar ah ka siiyey difaaciisa, hase yeeshee aanay raacin wixii uu ku amray inay sameeyaan.
“Laba gool oo midi rikoodhe ahaa ayuu naga dhaliyey. Aad ayay noogu caddayd khatartiisu, Arsenal na kubbado dhaadheer oo difaaca dabadooda lagu tuuro ayay ciyaartaa, sidoo kale kubadda ayay kula ciyaarayaan, balse khatartooda waa kubbadaha dhaadheer ee ay difaaca daba mariyaan.
“Cadhadaydu waxay tahay, in marka aad ciyaartoyda wax badan tusto ee aad kala shaqayso, aanu haddana si sahal ah u ogolaanay inaanu sii dayno (Aubameyang). Waa ciyaartoy tayo leh, goolkiisa labaadna waa nooca xawaaraha iyo tayada ee heerkiisa ciyaartoy ahaan ee uu ugu guuleysto kulamadan oo kale.”
Marka alga yimaaddo xakamaynta weerarka Arsenal, gaar ahaan Aubameyang ee uu kooxdiisa kula soo dardaarmay, waxa uu Lampard caddeeyey in kooxdiisu aanay si wanaagsan u ciyaarin, waxaanu yidhi: “Si fiican umaanaan ciyaarin, laakiin haddana fursadahayagii waanu helnay. Ciyaar sidan oo kale, Aubameyang wuu kaa takhalusi karaa.”
axadle 3880 posts
Chadian President garnered with new identify at 60th…